Two Cops(2017) - Myanmar Asian TV Channel
နောက်ထပ်စုံထောက်ကားလေးဖြစ်တဲ့ Two Cops ဆိုတဲ့ 2017 ထွက် Ongoing ကားလေးပါ … MBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ အပတ်စဉ် တနင်္လာနှင့် အဂါင်္နေ့တွေမှာထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ကားလေးပါ … စုစုပေါင်း၃၂ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် …
ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်တဲ့ စုံထောက် ချာဒုံတက် (Cho Jung Seok) …
မကြာသေးခင်ကမှ ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ ကန်ဆူချန်း(Kim Sun Ho) …
ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် သူတို့ ၂ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ပြောင်းသွားခဲ့တယ် …
အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာမတည့်အတူနေပေမယ့်လည်း … သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ခက်ခဲတဲ့အမှုတွေ ဖြေရှင်းကြတယ် …
အဲ့လိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့စုံထောက်က သတင်းထောက် ဆောင်းဂျီအာကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့ ….
သတင်းထောက်မလေးကလည်းဘယ်သူ့ကိုချစ်မိသွားမှာလဲဆိုတာတော့ ဒီကားလေးထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ …
Translator : Khant KoAung ,Vivian & Myint Mo Zaw
Episode 01 – Openload : Solidrive
Episode 02 – Openload : Soliddrive
Episode 03 – Openload : Soliddrive
Episode 04 – Openload : Soliddrive
Episode 05 – Openload : Soliddrive
Episode 06 – Openload : Soliddrive
Episode 07 – Openload : Soliddrive
Episode 08 – Openload : Soliddrive
Episode 09 – Openload : Soliddrive
Episode 10 – Openload : Soliddrive
Episode 11 – Openload : Solidrive
Episode 12 – Openload : Soliddrive
Episode 13 – Openload : Soliddrive
Episode 14 – Openload : Soliddrive
Episode 15 – Openload : Soliddrive
Episode 16 – Openload : Soliddrive
Episode 17 – Openload : Soliddrive
Episode 18 – Openload : Soliddrive
Episode 19 – Openload : Soliddrive
Episode 20 – Openload : Soliddrive
Episode 21 – Openload : Solidrive
Episode 22 – Openload : Soliddrive
Episode 23 – Openload : Soliddrive
Episode 24 – Openload : Soliddrive
Episode 25 – Openload : Soliddrive
Episode 26 – Openload : Soliddrive
Episode 27 – Openload : Soliddrive
Episode 28 – Openload : Soliddrive
Episode 29 – Openload : Soliddrive
Episode 30 – Openload : Soliddrive
Episode 31 – Openload : Soliddrive
Episode 32(Final) – Openload : Soliddrive
Genre: Comedy, Crime, Supernatural
Duration: 35 min min
TMDb: 8.8/10 Viki
Starring: Hyeri, Jo Jung Suk, Kim Sun Ho,
As the Moon , So Beautiful ( 2017 )
Japanese romance anime လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေ အတွက် 2017ထွက် animeကားကောင်းလေးပါ စုစုပေါင်း၁၂ပိုင်းပါရှိပြီး … IMDb rating မှာလည်း 8/10 တောင်ရထားတာဆိုတော့ ကြည့်သင့်နေပြီနော် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – စာသစ်နှစ်တစ်ခုရဲ့အစကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ စာရေးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသူ Kotarou Azumi နဲ့ ပြေးခုန်ပစ်အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Akane Mizuno တို့ဟာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ အတူတူကျ ကြပါတယ်…
2NE1 ဆိုရင်တော့အကုန်သိကြမယ်ထင်ပါတယ် … (အခုတော့အဖွဲ့ကွဲသွားပေမယ့်လည်း ) 2NE1 ရဲ့ Sandara Park နှင့် The secret of Birth,Love Rain, Good Doctor, Pinocchio ကားတွေမှာပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Kim Young Kwang တို့က ဒီကားလေးမှာ ပါဝင်ထားကြတဲ့ Mini series လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ”Dr…
Marvel’s Jessica Jones : Season 1 ( 2015 )
MMATV ကနေ Jessica Jones ဆိုတဲ့ 2015 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် … ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ Defenders လေးယောက်ဖြစ်တဲ့ Daredevil , Iron Fist , Jessica Jones & Luke Cage တို့ထဲက တစ်ယောက်ပါ … Season 1 မှာစုစုပေါင်း…
You’re all surrounded(2014)
ဒီဇာတ်ကားလေးအခု Channel 7မှာလွတ်လမ်းဆိုတဲ့နာမည်နှင့်ပြသလျက်ရှိတဲ့ကားလေးပါ TVကလွှင့်တာကိုမကြည့်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းကြည့်ဖို့အဆင်ပြအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော် … Review – ၂၀၁၄ကထွက်ခဲ့တဲ့စုံထောက်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့မင်းသား Lee Seung-Giနဲ့မင်းသမီး Go Ara(Blackမင်းသမီး)တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် အွန်ဒယ်ဂူ,အော်ဆူဆွန်း,ပါ့ခ်ထယ်အီ,ဂျီဂု ဆိုတဲ့စုံထောက်အသစ်လေးယောက် သူတို့လေးယောက်ကို P4ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ကြတယ် ဒါပေမဲ့သူတို့၎ယောက်ကအလုပ်အပေါ်သိပ်ပြီးတက်ကြွစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူး 😅😅😅 အဲ့လိုနဲ့သူတို့အသစ်၎ယောက်ဟာရာဇဝတ်မှုအဖြစ်များတဲ့ ဂန်နမ်းစခန်းမှာတာဝန်ကျပြီး…. သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဆိုပန်ဆော့နှင့်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သူတို့ လေးယောက်အပေါ်အားမရမှုတွေ သူတို့လေးယောက်ရဲ့အလွဲတွေကိုဟာသနှောပြီးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင်အွန်ဒယ်ဂူကကောသူ့ဘဝအမှန်ကိုဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားတာလဲ? သူနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြားကဆက်နွယ်မှုကဘယ်လိုလဲ? ဆိုတာကတော့ …..
Series အရှည်တွေကို MMATV ရဲ့တတိယမြှောက် အပိုင်း ၅၀ကျော် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချင်းလင်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့အဖေက အမွှေးရနံ့တစ်ခုကို တီထွင်ဖို့ကြိုးစားရင် ဓါတ်ခွဲခန်းမီးလောင်မှုနဲ့ အတူ သေဆုံးခဲ့ရသူ။ အမေဖြစ်သူကလဲ သူ့သမီးကို ထားခဲ့ပြီး နောက်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုယူခဲ့လို့ မိဘမဲ့တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ အဖွားဖြစ်သူက လိုက်ရှာပေမယ့် မတွေ့ဆုံခဲ့ရပါဘူး။ အသက် အရွယ်ကြီးလာတော့ ဟွားချင်းလင်လို့ ခေါ်တဲ့…